महिलाहरुको यी अं’ग छुदा आफैं स’म्बन्धका लागि अ’पिल गर्छन [६ टिप्ससहित] – live 60media
महिलाहरुको यी अं’ग छुदा आफैं स’म्बन्धका लागि अ’पिल गर्छन [६ टिप्ससहित]
काठमाडौं । वैवाहिक जीवनमा यौ’न सम्बधको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । यौ’न सम्बन्ध एक प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिय हो । दाम्पत्य जीवनमा यौ’न सम्बन्धले दम्पतीहरुलाई शारीरिक र भावनात्मक रुपले नजिक ल्याउने गर्छ । हप्तामा कम्तिमा तीन पटकसम्म यौ’न सम्बन्ध राख्नु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
वैवाहिक जीवनलाई सफल र सुखी कसरी बनाउनका लागि अरु कुराहरु जस्तै यौ’नको पनि आवश्यक्ता पर्छ ।उनीहरुलाई लाग्छ यसबारेमा कुरा गर्नाले आपसी कटुता पैदा हुन्छ । उनीहरु आफ्नो भावनाहरुलाई दबाउन थाल्छन् तर, भित्रभित्रै चिन्ताले उनीहरुलाई पिरोल्न थाल्छ जसको असर वैवाहिक जीवनमा पर्न जान्छ । त्यस्तै अनावश्यक रुपमा ग’र्भ रहनाले पनि दाम्पत्य जीवनमा असर पर्न सक्छ ।
लामो समयसम्म यौ’न क्रिया कायम राख्न र सन्तुष्ट पार्नका लागि विस्तारै विस्तारै तपाईंको जिब्रोले केटीको कान र स्त’नमा स्पर्श गर्नुपर्छ । किनकी दाहिने कान स्नायुमार्फत मस्तिष्कको आनन्द नियन्त्रण गर्ने भागसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।
पुरुषको घाँटीमा निश्चित संवेदनशील केन्द्र हुन्छ, यो हंसलीमा हुनसक्छ वा कपालमुनि वा टाउकोको मध्यको अन्तमा हुन्छ । त्यसैले महिलाले आफ्नो यौ’न साथिलाई बिस्तारै आफ्नो हात वा जिव्रोले त्यहाँ स्पर्स गर्नु पर्छ ।
लोग्नेले पत्नीलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । जुन अंग आँखाका लागि राम्रो या मन पर्छ र मनलाई आनन्दित तुल्याउँछ या का’उकु’ती लगाउँछ र शरीरमा एक प्रकारको तरंग प्रवाह गर्छ त्यहाँ हातले सुमसुमाउन सुरु गर्नुपर्छ । यस क्रियाले पत्नी का’मोत्तेजित हुँदै स्वयं नै सम्बन्धका लागि पहल गर्न सुरु गर्छिन ।
दम्पतीहरुले तत्काल ग’र्भनिरो’धका लागि अस्थाई साधन क’ण्डमको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अनावश्यक ग’र्भ रहनबाट बचाउँछ । यस्तै, अनावश्यक ग’र्भ नराख्नका लागि महिनावा’री भएको सात दिनमा संगि’नी सु’ई लगाउन सकिन्छ । यो एक पटक लगाएपछि लगाएपछि तीन महिनासम्म ग’र्भ रहँदैन ।
किनभने तपाईंको सफा र चम्किलो छालाको स्पर्शले नै साथिलाई का’मोत्तेजित बनाउँछ ।अन्तर रंग पललाई विशेष बनाउनको लागि आफ्नो शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । छालालाई नरम बनाउनको लागि समयसमयमा म’साज गर्नुहोस् ।
२३ वर्षिया इन्जिनियर केटिलाई विवाह गर्नकोलागी इमान्दार केटा चाहियो पूरा पढी सम्पर्क गर्नुहोस्
नेपालमा पछिल्लो समय विवाहको लागि एक नयाँ ट्रेन्ड सुरु भएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सञ्जालको माध्यम बाट माया प्रेम गरेर विवाह गर्नेहरुको संख्या पनि अचानक बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपालमा मात्रैं होईन संसारभरका मानिसहरुको दैनिकीलाई प्रभावित गरेको छ ।
नेपालको विशेष गरेर शहरी क्षेत्रमा पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव फैंलदो क्रममा रहेको छ । शहरमा विवाहलाई जिम्मेवारी भन्दा पनि रमाइलोको रुपमा लिने गरिएको विश्लेषण हुने गर्दछ । फेसबुकमार्फत धेरैंको विवाह भइरहेको छ साथमा पारपाचुके पनि भएको छ । उसो त अहिले प्ले स्टोरमा एप स्टोरमा जोडी जुटाउनको लागि नैं भनेर सयौंको संख्यामा एपहरु पनि रहेका छन ।
एपहरुको माध्यमबाट पनि सम्पर्क गरेर विवाह गर्ने गरेका छन । आज हामी यि एपहरु भन्दा अलिक फरक कुरा गरिरहेका छौं ।नेपालको चर्चित पत्रिका कान्तिपुर दैंनिकको विहेवारी भनेर लेखिएको एक विज्ञापनका बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौं ।
सम्पर्क मोबाइल नम्बर सहित भनिएको छ,“२६ बर्षिया एम आइटी छोरीलाई नेवार बर चाहियो,” यो सँगैं सम्पर्क नम्बर पनि दिइएको छ । नेपालमा रेडियो नेपालमा धेरैं पहिले देखि के तिमी मेरो साथि बन्न सक्छौं भन्ने कार्यक्रम एकदमैं लोकप्रिय बन्दैं आएको छ । अचेल पत्रपत्रिकाको माध्यम बाट पनि विवाहको लागि विज्ञापन हुने गरेको छ ।
भारतमा त विवाहको लागि एजेन्सीहरु नैं खडा गरिएको छ नेपालमा पनि एजेन्सी नभएका होईनन तर चर्चा कमैं मात्रामा हुने गर्दछ । मानिसको व्यस्त जीवनशैंलीले जिन्दगीको बारेमा सोच्ने फुर्सद नभइरहेको बेलामा यस्ता आवेदन खुल्नु फाइदा जनक हुने देखिन्छ तर व्यापारिक शैंलीमा विज्ञापन गरेर विवाह गर्दा भविष्यमा श्रीमान श्रीमती भएर बस्न कत्तिको सहज हुन्छ रु यो प्रश्न भने सबैंका लागि सोच्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको छ । साभार ईन्टरनेट @टाइम्स अफ नेपाली
← पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ?
रिक्सा चलाएर अ’पांग श्रीमान अनि छोरी पा’ल्दै यी नेपाली चेली, सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! →